डायस्पोरामा नेपाली संस्कृति र हाम्रो पत्रकारिता - Dainik Nepal
डायस्पोरामा नेपाली संस्कृति र हाम्रो पत्रकारिता
डिल्लीराम अम्माई २०७५ फागुन १७ गते ७:१८
पछि पारिएको तर ब्यापक बहस चलाउनु पर्ने आधुनिक नेपाली संस्कृतिबारेको बहस अहिले निस्क्रिय बन्दै गएको छ । नत त्यो बहस नेपालका बुद्धिजीबी वा पत्रकार बर्गले चलाउने प्रयत्न गरेका छन् नत झन्डै बाह्र लाखको हाराहारीमा डायस्पोराको मंच सम्हालिरहेका एनआरएनएहरुले नै यो बहसको थालनी गरेका छन् । प्रवासको नयाँ पुस्ताको अबको सांस्कृति र पश्चिमा ज्ञानबारे धारणा के त ? यो सार्थक बहस नचलाई रहने अबस्था अब छैन । उनीहरुलाई हाम्रो पुर्बिय दर्सन र कलाबारे एउटा दृष्टिकोण हस्तान्तरण गर्नु पुरानो पुस्ता मात्र नभएर पत्रकारहरुको समेत दायित्व हो । त्यसैले यो लेखमा पश्चिमा ज्ञानलाई हाम्रो मौलिक कलासंग कसरि जोड्ने भन्नेबारे तर्कहरु राख्न खोजिएको छ ।
आम अर्थमा प्रवासमा हामीले सिक्नुको अर्थ सिकेका सम्पूर्ण कुराहरुको आयात हैन । हामीले सिकेका सम्पूर्ण कुराहरुलाई आलोचनात्मक रुपमा ग्रहण गर्नु पर्छ भन्ने हो । हामीले हाम्रो पहिचानको रक्षार्थ र समाजको हित हुने क्रममा जसरि प्राचिनबाट सिक्दछौ त्यस्तै विदेश वा पश्चिमी सभ्यताबाट पनि सिक्न कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन। तलका तर्कहरु यहि कुराको वरिपरी छन् ।
हामीले बिदेशी रास्ट्र वा आफु बसेको देशबाट राम्रा कुराहरु सिक्नै पर्दछ र हाम्रो इतिहासको विकासक्रमबाट पनि राम्रा कुराहरु सिक्नु पर्दछ । नभरी राखेको अमिलोमा ढुसी लाग्छ । आधि बोतल अमिलोलाई हामीले पुरा भरेर राख्यौ भने बर्षौ केहि हुदैन । हामी दुवै तर्फको आधि आधिलाई पूर्ण बनाउने प्रयास गर्ने पर्छ । हामी नेपाली र पश्चिमा दुवै कुरामा निपुर्ण भयौँ भने तिनलाई मिलाएर एउटा हाम्रा मौलिक बिषेसता सहितको मौलिक बस्तुमा बदल्न सक्छौ ।
बि पी र मदन भण्डारीले त्यो प्रयत्न गर्नुभयो राजनैतिक परिप्रेक्षमा । त्यो सिद्दान्तको मौलिका सहित हामीलाई शिक्षा दिने प्रयत्न पनि गर्नु भयो । उहाँहरु नेपाली र पश्चिमा दुवै सभ्यताको अध्ययनमा निपुर्ण हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको त्यो निपुर्णता दर्सनको व्याख्या, साहित्य र ब्याबहारमा प्रष्ट देखिन्थ्यो । उहाँहरुका दार्स्निक व्याख्या नत बिदेशी रचनासंग ठ्याक्कै मिल्ने खालका छन्, न त पुराना शैलीका नेपाली राज नेताहरुका जस्ता छन् ।
हामीले उहाँहरुको स्प्रिटको मिहिन अध्ययन गरे जस्ती लाग्दैन । हामीले बिपी र मदन भण्डारीको यो स्प्रिटलाई मिहिन तरिकाले अध्ययन गर्नै पर्छ । नेपाली तथा पश्चिमा दुवै सभ्यता र राजनैतिक विकासक्रमको अध्ययनमा निपुर्ण हुनु पर्छ, नेपाली र बिदेशी कलाका राम्रा पक्षहरुलाई लिन कन्जुस्याई गर्नुहुँदैन । तिनलाई एक ठाउँमा गालेर एउटा नयाँ कलाको रचना गर्नु पर्छ । जुन हाम्रो रास्ट्रीय पहिचानले युक्त हुन्छ । नयाँ पुस्तालाई सुहाँउदो हुन्छ त्यो नयाँ संस्कृति। जुन हामीले चाहेका छैनौ तर युरोपियनहरुले संस्कृतिहरुको अन्तरघुलन र रुपान्तरण चाहेका छन्।
निस्चय पनि नेपाली र पश्चिमा चिजको यस्तो सफल संयोजन सजिलो छैन । यो प्रक्रियाले गालिन समय लिन्छ । केहि यस्ता चिजहरु छन् जसमा बिदेशी चिजहरु मिलाउन सकिन्छ । उदाहरणको लागि साहित्यमा भाषा , चरित्र तथा पृष्ठभूमि नेपाली हुनै पर्छ । तर ति नेपाली किस्ताबन्दी संरचना मै आउनु पर्छ भन्ने छैन । हामीले केहि यस्तो चिज निर्माण गर्न सक्दछौ जुन नत नेपाली हो नत पश्चिमा । यदि त्यस्तो चिज खच्चडकै रुपमा भएपनि नराम्रो हुदैन । दुइ चिज जोडिएर बनेको तेश्रो बस्तु फरक हुनु स्वाभाविक नै हो ।
बिपी र भण्डारीले त्यहि गर्ने प्रयास गरे बुझ्नेले कसरि बुझे थाहा भएन । जब कुनै दुइ चिज जोडीन्छ, तिनको रुप पनि फेरिन्छ । राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले नेपालको अनुहारमा ठुलो परिबर्तन हुँदैछ तर कसरि त्यस्तो परिबर्तन हुदैछ बुझेकै छैनौ ? नेपाली चिजको अहिलेपनि आफ्नै साँस्कृतिक बिषेसता रहेको छ । बिदेशी चिजहरु पनि निरन्तर परिबर्तनशिल छन् । पछिल्लो आन्दोलन पछि नेपालको परिवेसमा बिदेशी प्रभाब सहितको आधारभूत परिबर्तन आयो ।
संबिधान सभाको चुनाब र अहिलेको स्थानिय चुनाब पछि यो नितान्त नयाँ दिशामा रुपान्तरित हुँदैछ । यो पश्चिमा , भारतीय र आफ्नो मौलिक राजनैतिक तत्वहरुको समिश्रण सहित नयाँ दिशामा बिकशित हुदैछ । हामीले जेजस्तो रुपमा बुझेपनि सत्य यहि हो । यसको सहि समायोजन गर्न सकिएन भने डायस्पोरामा हाम्रो संस्कृति डुब्छ। यसलाई रुपान्तरित रुपमा बचाउन पत्रकारले अहम भूमिका खेल्नु जरुरी छ।
दोश्रो विश्व युद्ध पछिका राजनैतिक परिदृश्य अनौठो लागे झैं नेपालीको लागि यो नयाँ प्रयोग पनि अनौठो लाग्नु अस्वाभाविक हैन । अब हाम्रो ध्यान बीपीले भनेझै दुइ ध्रुबिय बिस्व दृष्टिकोणको अन्तरघुलन प्रजातान्त्रिक समाजबाद वा मदन भण्डारीले भनेझैको दुइ विश्व द्रिष्तिकोणको अन्तरघुलन बहुदलीय जनबाद तथा त्यो अनुकुलको सांस्कृतिक निर्माणतर्फ मुलुक घिर्सिंदै अघि बढेको अवस्थालाई अस्विकार गर्न सकिन्न । संस्कृति पनि बहुदेशी सामाजिक तन्तुहरुको आलोचनात्मक ग्रहणमा र खास गरेर समाजबादी समाजका अणुहरुलाई पुंजिबादी संसारका प्रगतिशील आवाजहरुमा मिलाइएर बनाएको कक्टेल झोल हो, जुन नेपाली मैलिकतामा निहित हुनुपर्छ त्यो युरोपको दोश्रो पीढीसम्म हामीले पुर्याउन जरुरी छ ।
यो कुरालाई बुझ्न मिहिन अध्ययनको जरुरि अबस्य हुन्छ ।
बाहिरबाट हेर्दा संसारका सबै देसहरुको कला र राजनैतिक आधारभूत सिद्धान्तहरुमा समान हुन्छ । तर रुप र शैलीगत भिन्नता अबस्यम्भाबी छ । विभिन्न पश्चिमा समाजबादी देशहरुका प्रत्येक कलासंग समाजबादी अन्तरबस्तु छ । तर नर्वे, फिनल्याण्ड , डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मन आदिसँग आफ्नो मौलिक रास्ट्रीय चरित्र भिन्नभिन्न छ । तिनीहरु बीच समानता र भिन्नता दुवै छ, साझा गुण र निजि बिषेसताहरु दुवै विद्यमान छन् । मेरो बुझाइमा यो एउटा स्वाभाविक नियम हो । सबै चिजहरु चाहे ति प्रकृतिसंग सम्बन्धित होउन, चाहे समाज वा ज्ञानको क्षेत्रसंग सम्बन्धित होउन सयस्तै हुन्छन । एउटै तलाउमा फुलेका कमलका फूलहरुलाई लिउँ । पहिलो हेराइमा ति समान देखिन्छन स तर जब हामीले गहिरिएर निरीक्षण गर्न थाल्छौ , प्रत्येक अर्को संग फरक देखिन्छ । दुइवटा उस्तै नितान्त समान फूलहरु खोज्नु असम्भब छ ।
संघर्ष,क्रान्ति, रुपान्तरण आदि सबैको लगभग एउटै आधारभूत सिद्धान्त हुन्छ । तर जतिबेला केहि सम्भाब्ता र प्रधान सिद्धान्तहरु माथि आधारित भएर प्रयोगको कुरा आउछ , त्यतिबेला प्रत्येक राष्ट्रमा भिन्नता दृष्टिगोचर हुन्छ । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति ,चिनियाँ क्रान्ति, २०४६ को नेपाली जनआन्दोलन र ६२र६३को जन आन्दोलनलाई लिउँ , आधारभूत रुपमा यी सबै क्रान्ति समान छन् तर तिनको रुपका सन्दर्भमा,जसमा ति सिद्धान्त प्रयोग भए , यी सबै क्रान्तिका थुप्रै भिन्नताहरु छन् । उदाहरणको लागि भारतमा भएको औपनिबेशिकता बिरुद्धको आन्दोलन र नेपालमा भएका सबै आन्दोलनहरु स्वाधिनता र प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलन हुन् । तर यी आन्दोलन सारमा प्रजातन्त्र प्राप्ति वा स्वाधिनताका लागि भएपनि रुपमा अत्याधिक भिन्नता पनि छन् ।
उदाहरणको लागि २०४६ को आन्दोलन शहर केन्द्रित आन्दोलन थियो भने ६२ र६३ को आन्दोलन राजतन्त्र बिरुद्धको गाउँबाट शुरु भएको ससस्त्र विद्रोहको निस्कर्ष थियो । यो जनयुद्धको स्थगन सम्झौताबाट गरिएको मौलिक तथा अनौठो राजनैतिक ब्यबस्थापन थियो । त्यस्तै भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम साम्राज्यबादी औपनिबेशिकता बिरुद्धको बिद्रोह थियो । यी सबै संघर्ष पछि संस्कृतिमा पनि भिन्नता आयो,जुन हामीले शुरुमा देख्ने सकेनौँ। तर अहिले भाषागत रुपमा समेत असर गर्नेगरी अभ्यासरत हुदै गएको छ। चेतनालाई समेत एक खालले असर पारेको छ। सोचाइमा उस्तै प्रभाब देखिन थालेको छ। शुद्ध हिन्दि बुझ्नेले सहरिया मिसावट हिन्दी बुझ्दैन। सुद्ध बोल्ने अहिले नेपाल र अन्य देशमा समेत गवार हुदै छ। हामी पत्रकारहरु पनि त्यसैमा बहकिएका छौं।
संसारभरी रहेका समुदाय बिच कलाको आफ्नै बिशिष्ट राष्ट्रिय रुप र राष्ट्रिय शैली हुन्छ । सबैले यो कुरा बुझ्दैनन् । अझ प्रवासमा रहेकाहरुले यो कुरा बुझ्न झन् मुस्किल हुन्छ । उनीहरु आफ्ना राष्ट्रिय बिशेसताहरुको उपेक्षा गर्छन र अन्धतापुर्वक पश्चिमाहरुको पुजा गर्छन र के सोच्छन भने हरेक सन्दर्भमा पश्चिमी सभ्यता नै उत्कृष्ट छ । उनीहरु पूर्ण पश्चिमीकरणको वकालत गर्दै निकै अगाडिसम्म पुग्दछन । यो गलत हो । पूर्ण पश्चिमीकरण अव्यवहारिक छ र यसलाई नेपाली जनसाधारणले स्वीकार गर्दैन । यो हाम्रो दोश्रो पुस्तालाई बुझाउन सकेका छैनौँ किनकी हामि पनि बहकिएका छौँ।
फरक सन्दर्भमा भन्दा,कला र प्राकृतिक बिज्ञान यस सन्दर्भमा फरक हुन्छन । औसधि विज्ञानको कुनै राष्ट्रिय रुप हुदैन तर कलामा राष्ट्रिय प्रश्न अगाडी आउछ । यसको मुख्य कारण के हो भने कला भनेको जनताको जीवन , बिचार र आवेगको प्रस्तुति हो र यसले राष्ट्रिय परम्परा र भाषासंग अत्यन्त निकट सम्बन्ध राखेको हुन्छ ।ऐतिहाँसिक रुपमा कलात्मक सम्पदा सांस्कृतिक ढाँचाकै बीचबाट बिकसित हुन्छ । सत्य यहि हो।
नेपाली कला, संगीत, पेन्टिङ, नाटक, गित र नृत्य तथा साहित्य प्रत्येकका आफ्नै ऐतिहासिक बिकास क्रम छन् । नबुझ्नेहरुले के भन्दछन भने नेपाली मुल्यको कुनै नियम छैन र ति अध्ययन योग्य अथवा बिकास प्रेमी लाग्दैनन् । यसले बस्तुत स् नेपाली कलामा एउटा राष्ट्रिय सुन्यबादको प्रवृतिलाई पश्रय दिइरहेको छ । त्यो सुन्यतालाई झाँक्ने काम पत्रकारहरुको होकी हैन ?
संसारमा प्रत्येक रास्ट्रको आफ्नो ईतिहाँस हुन्छ र त्यसका आफ्ना सबलता र दुर्बलता पनि हुन्छन । आरम्भदेखि नै उत्कृष्ट र निकृष्ट चिज लामो समयसम्म परस्पर एकै ठाउमा मिसिदै आएका छन् । तिनलाई छुट्याउनु र निकृष्ट चीजको थुप्रोबाट असललाई अलग्याउनु अत्यन्त गाह्रो काम हो । तर यो कठिनाइका कारण हामी ईतिहाँसलाई नकार्ने वा उपेक्षा गर्न सक्दैनौ ।आँफुलाई ईतिहाँसबाट अलग्याउनु र आफ्नो सम्पदाको परित्याग गर्नु राम्रो हैन । यो कुरा तर्कसंगत रुपमा लेखक वा पत्रकारले राख्नु पर्छ र बहस चलाउनु पर्छ।
निश्चय पनि यसको अर्थ यो हैनकी हामीलाई आँफु रहेको प्रवासबाट सिक्ने आवस्यकता छैन । हामीले प्रवासबाट धेरै कुराहरु सिक्नै पर्दछ । हामीले आधारभूत कुराहरुमा निपुर्णता हासिल गर्नै पर्दछ । हामीले बिदेशी कुराहरु सिक्छौ किनभने हामी नेपाली समाजको मौलिक मूल्यमान्यता सहित बिकास गर्न चाहन्छौ स्वदेशमा र प्रवासमा पनि । यस परिप्रेक्षमा प्राकृतिक र सामाजिक बिज्ञान समान छन् ।
हामीले अन्तबाट सबै राम्रा कुराहरुमा निपुर्नता हासिल गर्नै पर्दछ र त्यसपछि त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । त्यस प्रक्रियामा त्यसलाई बिकसित गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपाली मौलिकतालाई छुट्याउन विदेशबाट प्राप्त आधुनिक ज्ञान र पद्धतिको प्रयोग आवस्यक छ । जिब बिज्ञान, रसायन बिज्ञान लगायत भौतिक बिज्ञान र चिकित्सा बिज्ञानलाई नै लिउँ । यी सबै हरेक मुलुकमा आवस्यक छन् । त्यस्तै हाम्रो मौलिक आयुर्वे्दिक चिकित्सा पद्धतिसंग पश्चिमा पद्धतिलाई जोडियो भने त्यो झन् आफ्ना बिशेषता सहितको नयाँ र बिकसित पद्धति बन्न सक्छ ।
यदि यस्तो प्रयोग प्राकृतिक र सामाजिक विज्ञानमा सम्भब छ भने कलामा यो झन् उपयुक्त मानिन्छ । तर जतिबेला हामीले सिकिरहेका हुन्छौ, हामीले त्यसलाई नेपाली कलाको बिकास र अध्ययनका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा ति हितकारी हुदैन । अरुको कला अनुशरण गर्दा नेपाली जनसमुदायको सांस्कृतिक कलाको लागि हुनु पर्छ जसको एउटा आफ्नै पृथक राष्ट्रिय रुप र शैली छ ।
हामीले यो कुरा स्विकार्नु पर्दछ कि आधुनिक संस्कृतिको परिप्रेक्षमा हामी पश्चिमा भन्दा पछि छौ , हामि पछाडी पारिएका छौ । के कलाको सन्दर्भमा पनि यहि स्थिति हो त ? कलाका क्षेत्रमा हाम्रा सबलाताहरु पनि उत्तिकै छन् । हामीले आफ्ना कमजोरी हटाउने अथवा सच्याउने क्रममा बिदेशी राष्ट्रहरुबाट राम्रा कुराहरु ग्रहण गर्ने कुराहरुमा सकारात्मक हुनु पर्छ । यदि हामी हाम्रा पुरानै तरिकामा टाँस्सिइरहन्छौ र बिदेशी साहित्य अध्ययन गर्दैनौ,त्यसलाई नेपालमा चिनाउदैनौ , यदि हामी बिदेशी संगीतलाई कसरि सिक्ने र कसरि बजाउने भन्ने कुरा जान्दैनौ भने त्यो राम्रो हैन । हामी आफ्नो बाहेक सबै खराब भन्ने कठमुल्लाबादी पनि हुनु हुदैन ।
तर प्रवासको नेपाली पुस्तालाई यो सबको ज्ञान छैन । उनीहरुले यताका सबै राम्रा र नेपालका सबै खराब भन्ने कुरामा बिस्वस्त हुन थालेको आभास पाइञ्छ । त्यो पछिको लागि खराब मात्र हैन अनिष्टकारी पनि छ ।
हामीले डायस्पोरामा जन्मे हुर्केका नयाँ पुस्तालाई यो बुझाउन सक्नु पर्दछ कि कलामा स्वतन्त्र सिर्जनात्मक गुणहरु हुन्छन । यो युगको चरित्र , साथै राष्ट्रिय चरित्रले बिशिष्ट रुपबाट भरिएको हुन्छ । नेपाली कलाले बढी भन्दाबढी बिगतलाई पनि हेर्नु हुदैन , नत ज्यादाभन्दा ज्यादा पश्चिमीकरण नै हुनु पर्दछ । यसले ब्यापक रुपमा युग र राष्ट्रका बिशेषताहरुलाई प्रतिनिधित्व गर्नु पर्दछ ।
यो सबै कुरा हामी प्रवासबाट मुलुकप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोणको लागि हो । हामी कि त पुरै सकारात्मक छौ कि पुरै नकारात्मक । हामी आलोचनात्मक हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेका छैनौ । हामीले आफ्नै सांस्कृतिक बिशेषता र सभ्यताको मर्मत गर्नमा बिदेसमा आर्जन गरेको ज्ञानलाई प्रयोग गर्न सक्यौभने हाम्रो कला र संस्कृतिको भबिस्य उज्वल हुनेछ । जुन कुरा हामीले प्रवासमा भएकोनयाँ पुस्तालाई बुझाउन सक्छौ कि सक्दैनौ हाम्रो सांस्कृतिक विरासतको महत्वा र बिकासलाई त्यसले धेर(थोर प्रभाब पार्नेछ । पत्रकार वा लेखकले अब डायस्पोराको नेपाली समाजमा यो बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन।